DEG-DEG+AKHRISO: Ciidanka PMPF oo digniin kulul la kulmay, Maxaa lagu heystaa? – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
DEG-DEG+AKHRISO: Ciidanka PMPF oo digniin kulul la kulmay, Maxaa lagu heystaa?
Guddoomiyaha gobalka Haylaan, Maxamed Faarax Aadan ayaa ku eedeeyay Ciidanka PMPF Puntland inay ku xad-gudbeen soohdinta gobalka, ayna deegaanno kamid ah Haylaan oo ay ka sameeyeen biyo-dhaamin ku sheegeen inay ka tirsan yihiin gobalka Karkaar.
Waraaq kasoo baxday Guddoomiye Maxamed Faarax ayuu ugu baaqay maamulka Ciidanka PMPF Puntland inay ka waantoobaan in deegaannada gobalka Haylaan, ay ku tilmaamaan inay ka tirsan yihiin gobalo kale, isagoo xusay inay ka sugayaan jawaab.
Maanaa waalan mise cadan baa laga heesayaa, hadday biyo u dhaamiyeen ana Haylaan ama Karkaar sow wax lagu farxo maaha maxaa eedda keenay. Ninkii wax wanaagsan qabta ilaahay ha ka ajar siiyo oo weliba u qabta dadka abaarsan ee reer miyiga ah.
Kkkk gudoomiyuhu intii uu shicibka tabaalaysan u gargaari lahaa ayuu waxaan Jirin oo maalayacni ah war ka digitay. Hogan xumada heerkasta ah ee haysta reer puntland Cadad maleh.
WARSANGELINA DHULKIISA MA LA SHEEGTAY DHULBAANTE AYAA LA OGAAYEE?!!!!
Karkaar & Sanaag maxaa isu keenay?
Xuduudii Ingiriis & Talyaani waxay maraan duleedka magaalooyinka Garowe,Qardho,Bosaso.
Hadana waa xuduudaha dawladaha Somaliland & Somalia.
Inoo ilaaliya dhulkeena.
Muwaadin Somalilander ah waa kaas.
Wuxu xil u hayaa Majertenia,hadana wuxu ilaalinayaa xuduudaha,dhulka qaranka ee muqadaska ah.
Allay ka tahay inaydaan taako dhulkeena helayn.